HALATRA KAONTENERA : Naiditra am-ponja vonjimaika ireo olona efatra voarohirohy
Efa nidoboka am-ponja vonjimaika ny efatra tamin’ireo nanodinkodina kaontenera tao Antsiranana, ny 28 febroary lasa teo, rehefa nandray ny andraikitra tandrify azy ny mpitandro filaminana, taorian’ny fitoriana nataon’ireo olona lasibatra tamin’ity halatra kaontenera ity. 13 mars 2019
Raha tsiahivina ny raharaha, nisy olona valo nanana entana tamina kaontenera tonga tao amin’ny fadintseranana Antsiranana, ny volana aogositra 2018. Anisan’ny entana tao anatin’ireo kaontenera ireo, ny fiara 4x4 roa, niampy ordinatera miisa 30 an’ny Oniversiten’Antsiranana, groupe, Quad sy entana maro isan-karazany. Naka “transit” ny tompon’entana, izay nikarakara ny fakana ireo entana, niaraka tamin’ny olona nomena fahazoan-dalana amin’ny fikarakarana ny famoahana azy ireo tao amin’ny fadintseranana ao Antsiranana.
Nilaza anefa io olona nomem-pahefana io, fa mananosarotra ny fandoavana ny haba, fa misy olona mpandraharaha avy any Nosy Be afaka mikarakara ny famoahana entana, fantatra amin’ny anarana hoe Thierry Be 52. Tanjon’ireo olona manana entana moa ny hamoahana ireo entana ireo any amin’ny ladoany ka tsy nametraka olana tamin’ny fikarakarana izy ireo. Nomena fanomezam-pahefana na “procuration” io olona nolazaina fa mpandraharaha io miaraka amin’ilay “transitaire” momba ny famoahana ireo entana. Ny antontan-taratasy rehetra mahakasika ireo entana avoaka ao amin’ny ladoanin’Antsiranana, any amin’io “transitaire” io avokoa.
Ny zoma 28 septambra 2018 no nihaona ny tompon’entana niaraka tamin’ireo mpandraharaha sy ilay Transitaire ka nambara fa aleo ny alatsinainy no hakana ny entana. Ny tompon’entana nanamarika fa mbola tsy nisy ny fandoavam-bola tany amin’ny ladoany, fa hotanterahina ny alatsinainy io. Ny sabotsy ampitson’io, navoakan’ ilay voalaza fa mpandraharaha an-tsokosoko ny kaontenera misy ireo entana marobe tany amin’ny ladoany. Tsy fantatra izay fomba namoahan’izy ireo ny entana tao amin’ny Seranan-tsambo. Tsy fantatra koa ny toerana nitondran’izy ireo azy ary tsy nisy mpiasan’ny ladoany na zandary na tompon’andraiki-panjakana tamin’ny namoahan’ireo olona ireo ny entana. Ny alatsinainy, tsy tonga tamin’ny fotoana nifanomezana teny amin’ny fadintseranana ilay mpandraharaha. Rehefa nanontaniana koa ny tao amin’ny ladoany, nilaza fa tsy misy izany kaontenera izany ao amin’izy ireo. Velom-panontaniana ny fomba namoahana ny entana ilay « transitaire » satria any aminy avokoa ny antontan-taratasy rehetra. Vokany, nametraka fitoriana ireo tompon’entana tao Antsiranana, ary natao avokoa ny fikarohana rehetra.
Nisy ny tratra tao an-tampon-tanànan’ Antsiranana ary ireo indray no nilaza fa nalefa any Nosy Be ny entana. Fantatra tamin’io fanadihadiana io fa nentin’ireo olona ireo nandeha any Nosy Be ireo entana, raha mbola tsy nahafantatra ny zava-nitranga kosa, ny tompon’entana. Natao ny fikarohana ireo entana ary tratra tany amina tranon’olona maromaro. Isan’ireo voasambotra ilay mpandraharaha antsoina hoe Thierry Be 52, Ry La Glasse ary ry Richard sy ny namany. Miisa efatra ireo tra-tehaka ary nidoboka any am-ponja amin’izao fotoana, raha mbola karohina kosa ny iray naman’izy ireo. Ireo entana azo kosa, mbola nogiazana ao amin’ny biraon’ny zandary any Nosy Be.
Nivadika ny rasa
Nivadika indray ny rasa fa nisy ny fisamborana tamin’ireo fianakavian’ny olona lasibatra tamin’ity fahaverezana kaontenera ity tany Ambanja, afakomaly ary nentina any Nosy Be. Ny manaitra amin’ity raharaha ity, ny anaran’ny olona ao anaty taratasy fampiantsoana, dia mipetraka any ampitan-dranomasina, saingy nentina any Nosy Be ihany ny fianakavian’ilay olona lasibatra tamin’ity resaka fangalarana kaontenera ity. Nanamafy ny mpisolovavan’ilay fianakavian’ny lasibatra fa tsy tokony ho any Nosy Be no hanaovana ny famotorana fa any Ambanja satria any no mipetraka ny fianakavian’ilay olona lasibatra tamin’ny halatra kaontenera.
Raha tany amin’ny faritanin’ Antsiranana no nisian’ny fahaverezana kaontenera, tokony ho any amin’ny Tribonaly ao an-toerana no hanaovana ny raharaha, saingy lasa any Nosy Be. Sady tsy ao anatin’ny taratasy fampiantsoana ilay olona nalaina tany Ambanja, raha tany Nosy Be no nisehoan’ny fahaverezana kaontenera ary any Nosy Be no hanatontosana ny famotorana androany. Sady nalaina baraka no nofatorana rojo vy ilay fianakaviana lasibatra. Andrasana, araka izany, ny fivoaran’ity raharaha ity.